एक रात प्रहरी हिरासतमा कटाएर निस्किइन् आस्था
२०७६ माघ १४ मंगलबार, गत साता प्रहरी र राउतबीच सुरक्षाजाँचका क्रममा भएको भनाभनको विषयलाई लिएर उनले सामाजिक संजालमा बयानबाजी गरेकी थिइन् । घटना बुधबार अपराह्नको हो । राउत त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक उडान कक्षबाट भद्रपुर जाँदै गर्दा उक्त घटना भएको थियो । ... बाँकी अंश»
कृष्णले कृष्णालाई चल्न माया चल् भनेपछि (भिडियोसहित)
२०७६ माघ १४ मंगलबार, गायक कृष्ण समीप सुवेदीले सात बर्षपछि आफ्नै प्रस्तुतीमा गीत सार्वजनिक गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
करोडपति भए पनि १.२५ रुपैयाँ ऋण टाउकोमा लिएर हिड्छन् सलमान
२०७६ माघ १३ सोमबार, काठमाडौं । बलिउड स्टार सलमान खान बाल्यकालमा कतै जादै थिए । उनको साइकल बाटैमा बिग्रियो । जसलाई ठीक गर्न उनी साइकलवाला भएको ठाँउमा गए । जब त्यहाँ पुगे उनीसँग पैसा थिएन उनी शर्ट्स लगाएका थिए । ... बाँकी अंश»
थुनामा चारदिनको म्याद भएपनि चाडै छुट्नसक्ने
२०७६ माघ १३ सोमबार, पक्राउ परेकी उनलाई चार दिनको म्याद थपिएको भएपनि चाडै वयान सकेर जति सक्दो चाडो छोड्ने तयारी समेत गरिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ । ... बाँकी अंश»
यी अभिनेत्रीको तस्विर जुम गरिगरि हेर्छन् सलमान
२०७६ माघ १२ आइतबार, सलमानले पनि हरेक प्रश्नको जवाफ अत्यन्त ध्यान दिएर दिन्छन्। अहिले सलमानको जवाफसहितको एक भिडियो भाइरल भइरहेको छ। कपिल शर्माले सलमानलाई सोधे,' तपाईलाई धेरै केटीहरुले मनपराउछन्, सोशल मिडियामा मेसेज गर्छन् होला, तर के तपाईले कुनै केटीलाई मेसेज पठाउनुभएको छ वा कसैको प्रोफाइलमा गएर जुम गरेर फोटो हेर्नुभएको छ?' ... बाँकी अंश»
बलिउड स्टारबाट सन्तानको नाम राख्नेले थाहाँ पाउनुपर्ने वास्तविकता
२०७६ माघ १० शुक्रबार, काठमाडौं । बलिउड कलाकारको नामबाट प्राय मानिसहरुले आफ्ना सन्तानका नाम राख्ने गर्छन् । तर केहि बलिउड कलकारकै वास्तविक नाम भने उनिहरुलाई थाहा नहुन सक्छ । सलमान, अमिताभ लगायतका बलिउड कलाकारका यस्ता छन् वास्तविक नाम । ... बाँकी अंश»
डिसहोमले ल्यायो बच्चाको लागि नयाँ रोमाञ्चक च्यानल 'रायम्स'
२०७६ माघ ९ बिहिबार, काठमाडौं। डिसहोमले एउटा विशिष्ट च्यानल ‘रायम्स’ मार्फत भोलीको कर्णधारहरुको लागि आजको दिनमा रोमाञ्चक प्रारम्भिक शिक्षण आधार तयार पारेको छ। २ देखि १२ बर्षसम्मका बच्चाहरुको लागि अत्यन्तै अन्र्तक्रियात्मक च्यानल हो। तपाई च्यानल नं. ८०९ मा यो च्यानल हेर्न सकिनेछ। ... बाँकी अंश»
२०७६ माघ ९ बिहिबार, काठमाडौं । बलिउडमा कसको सम्बन्ध टुट्यो र कोसँग जोडियो भन्न गाह्रो छ। सलमान खानकी नायिका कट्रिना कैफको नाम विक्की कौशलसँग विगत केही दिनदेखि जोडिन थालिएको छ । दुवैले एक अर्कालाई डेट गरिरहेको भनिएको छ । यद्यपि यस बिषयमा दुबैले कुने प्रतिक्रिया दिएका छैनन। यसै बीच, कट्रिना र विक्की कौशलका नयाँ तस्वीरहरु चर्चामा छन। दुवै बुधबार रात साथीको डिनर पार्टीमा देखिएका थिए । ... बाँकी अंश»
२०७६ माघ ८ बुधबार, इंटरनेशनल खिलाडी फिल्मको शुटिङको क्रममा दुबैबीच प्रेम भयो। एक अन्तर्वार्तामा, ट्विंकलले भने कि जब उनले अक्षयलाई डेटिङ गर्न थालिन्, उनी लामो सम्बन्धबाट बाहिरिइन् र कसैसँग केही दिन रमाइलो गर्न चाहन्थिन्। ट्विंकलका अनुसार उनले अक्षयलाई केवल १५ दिनको लागि आफ्नो प्रेमी बनाएकी थिइन्। यस्तो अवस्थामा दुवैले केही समय सँगै बिताएपछि विवाह गर्ने निर्णय गरे। ... बाँकी अंश»
२०७६ माघ ८ बुधबार, माघ १२ गते हुने उक्त फेसन शो कार्यक्रममा मोडलहरुले माइनस ४० डिग्री तापक्रममा र्याम्पमा उत्रेर क्याटवाक गर्नेछन् । ... बाँकी अंश»
२०७६ माघ ७ मंगलबार, शाहरुख खानका छोरा हुन् आर्यन । जसलेर् लायक किंगमा बाबु शाहरुखसँगै आवाज दिएका थिए । आर्यनलाई कारको पनि निकै शौक छ। उनिसँग मर्सिडीज बेन्ज र फेरारी जस्ता महंगा कार रहेका छन् । आर्यन आफ्ना बुबा शाहरुख खानसँगै 'मन्नत' बंगलामा बस्छन् । शाहरुखसँग मुम्बईमा मन्नत लगायत विश्वका कयौ स्थानमा सम्पती रहेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७६ माघ ७ मंगलबार, शाहरुख खानले आफ्नो जीवन यात्राको बारेमा भने, "म पहिलो तलबबाट ताजमहल हेर्न गएको थिएँ, जुन ५० रूपैयाँ थियो। तर सम्पूर्ण पैसा रेलको टिकटमा खर्च भएको कारण बचेको केहि पैसाले मैले एक गिलास चिसो पेय पदार्थ लिएँ। त्यो गिलासमा झिगा परेको थियो , तर पैसा नभएकोले मैले त्यही पिएँ। त्यसपछि म वान्ता गर्दै आफ्नो यात्राबाट फर्किए। " ... बाँकी अंश»
२०७६ माघ ६ सोमबार, उनको शुरुआती फिल्मले खासै चर्चा कमाउन सकेको थिएन तर उनको जीवनको बारेमा भने धेरै चर्चा शुरु भयो । उनी आफ्नो तीन वर्षको करियरमा तीन व्यक्तिसँग जोडिएकी थिइन् । दुर्भाग्यपूर्ण तीनै व्यक्तिहरु विवाहित थिए । आफ्नो दोस्रो फिल्ममा उनको डेनी डोंगजप्पासँग अफेयर्स चलेको थियो । यद्यपि यो धेरै दिनसम्म भने टिकेको थिएन । यसपछि सधैं परवीन बाबीको अफेयर्स चर्चामा रहेको थियो । ... बाँकी अंश»
२०७६ माघ ६ सोमबार, गायक आर्जन यस अघि घाँटी भन्दा तल त राम्रै हो बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक गरेर चर्चा र विवादमा तानिएका थिए। यस गीतमा भने उसको तारिफ भएको छ। ... बाँकी अंश»
थाईल्याण्ड र अस्ट्रेलियामा '१२ सत्ताईस'
२०७६ माघ ६ सोमबार, ह्याप्पी प्लानेट फिल्म्सले कमेरो फिल्म्स स्क्रिन संगको सहकार्यमा निर्माण गरेको चलचित्रमा समिर श्रेष्ठ, अभिषेक नेपाल, काजी राना, आश्मिता लामिछाने, सम्रांत थापा, एवोन राज उप्रेती, भिष्म जोशी, आश्मिता खनाल, बिना कार्की लगायतको अभिनय रहेको छ । ... बाँकी अंश»
महेश भट्टको पछि विना कपडा कुदिन् परवीन बाबी
२०७६ माघ ६ सोमबार, ७० को दशकमा परवीन आफ्नो अभिनय करियरमा टप थिइन् । उनि निर्माता महेश भट्टलाई चहान्थिन् । सन् १९७७ मा दुबैको प्रेम चर्चामा रहेको थियो । सो समय महेश भट्ट विवाहित थिए । ... बाँकी अंश»
पारसको हर्कतले रिसाए सलमान
२०७६ माघ ५ आइतबार, पारसको घरबाट आएको खाना पनि आकांक्षाले पठाएकी थिइन्। पारसकी आमाले बनाएकी थिइनन् । सलमानले यो कुरा खुलासा गर्दै भने , 'आकांक्षा मनपर्ने रेस्टुरेन्टमा गइन् र त्यहाँबनट सबै खाना पठाइन्।' यस पछि, सलमान भन्छन् तिमिले माहिरालाई कठपुतली भनेका छौ । तिमिंले पर्ललाई यो सबै खेल भित्रै गर्दै छौ भनेर भन्यौ ।' ... बाँकी अंश»
यी लेखकले सडकमा काटे धेरै रात, दिन फर्किएपछि लिए अमिताभभन्दा बढी पैसा
२०७६ माघ ३ शुक्रबार, काठमाडौं । जावेद अख्तर भातीय सिनेमाका सर्वश्रेष्ठ लेखक तथा गीतकार हुन् । उनको जन्म १७ जनवरी १९४५ मा ग्वालियरमा भएको थियो। उनका बुबा जा निसार अख्तर प्रसिद्ध कवि र आमा सफिया अख्तर लेखिका थिइन् । जावेदले एक संवाद लेखकको रूपमा बलिउडमा डेब्यू गरे, पछि उनी स्कृप्ट राइट र गीतकार पनि बने । जावेद अख्तरले ८ पटक लिरिक्सका लागि फिल्मफेयर अवार्ड प्राप्त गरेका छन्। उनको उत्कृष्ट कार्यका लागि ८ पटक राष्ट्रिय पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका छन्। उनलाई भारत सरकारले पद्मश्री र पद्मभूषणबाट पनि सम्मानित गरेको छ। ... बाँकी अंश»
प्रहरीले सिसी टिभी फुटेज हेर्‍यो, गायीका राउतमाथि अनुसन्धान हुँदै
२०७६ माघ ३ शुक्रबार, यस विषयमा महिला प्रहरीले महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा घटनाको विवरणसहित जानकारी गराउनुभएको छ । उक्त विवरणमा ‘सुरक्षाको जाँच गर्न खोज्दा किन गर्नुप¥यो, म गायीका हो, चिन्नु भएन ?’ भनेर गायीका राउतले उल्टै प्रश्न गरेको फुटेजमा उल्लेख रहेको कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक किरण बज्राचार्यले बताउनुभयो । ... बाँकी अंश»
२०७६ माघ ३ शुक्रबार, काठमाडौं। नेपाल–प्रज्ञा प्रतिष्ठान र युवा परिषद्को आयोजनामा माघ १५ र १६ गते राष्ट्रिय गजल महोत्सव हुने भएको छ । महोत्सवमा सातै प्रदेशबाट युवा गजलकारहरूको सहभागिता रहने छ । अग्रज गजलकार अतिथिका रूपमा सहभागी हुने छन् । ... बाँकी अंश»